Qasaaraha ka dhashay qaraxii Baydhabo oo Gaaraya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 28 February 2016 29 February 2016
Faah faahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa qaraxyo ka dhacay Baydhabo, kaasi oo ugu yaraan 17 ruux ay ku geeriyootay halka 60 kalena ay ku dhaawacmeen kaddib markii labo qarax oo is xig xigay ay ka dhaceen bartamaha magaalada Baydho ee xarunta gobolka Bay.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Baydhabo Siraaji Sheekh Isxaaq oo tegay Isbitaalka Baydhabo ayaa ku soo waramay in qarax koowaad uu ka dhacay maqaaxi lagu magacaabo Reedo oo ay geysteen labo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab oo iska soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, halka qarax labaad uu isna ka dhacay maqaaxi lagu magacaabo Suweys, kaasi oo loo adeegsaday gaari nuuca Hoomey loo yaqaan oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa.
Tirade dadka ku dhintay labada qarax ayaa la sheegay inay gaarayaan 20 ruux halka kuwa ku dhaawacmayna ay iminka mareyso 60 qof oo u badan dad rayid ah oo ay ku jireen haween shaaha ka ganacsadaiyo dadkii u soo gaxwo doontay.
Agaasimaha isbitaalka Cabdifataax Ibraahim Xaashi ayaa sheegay in todobo ka mid ah dadka ku dhintay qaraxa, la garan la’yahay kadib markii ay wajiga ka gubteen, isagoo intaa ku daray in dadka dhaawaca ah ay isugu jiraan kuwa fudud iyo kuwa xaaladooda ay halistahay, balse ay wadayaan dadaalkooda ku aadan sidii loo dabiibi lahaa dhaawacyada isbitaalka la geeyay.
“Dadka dhaawaca ah ee naloo keenay waxa ay gaarayaan 60-ruux, 42 ka mid ah jiif ayaa u soo baxday halka 18-kale ay dib ugu laabteen guryahooda, tirada dhimashada waa 20-qof, todobo ka mid ah isbitaalka ayay ku dhinteen, halka 13-kalena naloo keenay iyaga oo meyd ah, kuli shacab ayay ahaayeen” ayuu yiri Agaasimaha Isbitaalka C/fataax Ibraahim Xaashi.